Tungsten Boride, WB - Goodao Technology Co, Ltd.
Tungsten boride ine yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, kemikari kugadzikana uye zvimwe
nzwisisika zvivakwa. Haisi chete nyowani yepamusoro yezvinhu, asi zvakare ine yakakwira
kuomarara. Icho chinhu chakakosha kudzivirira bara muchiuto. Tungsten boride ine
yakawanda zvikamu zvechikamu, uye iyo dhizaini
Molecular fomula BW
CAS Nhamba 12007-09
Kuwandisa 10,77 g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka 2900℃
Zvishandiso BW ine yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, kukwirira kuitisa uye kukwirira uye kukoshesesa kuramba kumarudzi akasiyana enhau. Aya maexecellent zvivakwa anoita WB makomponi anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakaomarara Grinding kupfeka uyehigh tembiricha ngura electrodematerials, kukanda chakuvhuvhu, chinokukurwa uye zvichingodaro.
Sirivha chena octagonal crystal.
Hukama hwehukama 10.77, nzvimbo inonyungudika inenge 2900 ℃.
Insoluble mumvura, inogadzikana mu aqua regia.
Boron uye tungsten upfu zvakabatanidzwa-kupisa kune yakanyanya tembiricha.
Tungsten boride ine yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, makemikari kugadzikana uye zvimwe zvakakwana zvinhu Haisi chete nyowani yepamusoro yezvinhu, asi zvakare ine yakasimba kuomarara. Icho chinhu chakakosha kudzivirira bara muchiuto. Tungsten boride ine yakawanda chikamu zvikamu, uye chimiro chematanho akasiyana chinoshandukawo. Kwemakore anodarika makumi mashanu, iyo tungsten yepamusoro boride yakafungidzirwa kuve WB4, iyo ine matatu-mativi gridhi e boron maatomu. Iyo thermodynamic kugadzikana uye mechimiro zvivakwa zveanogona masisitimu ezvikamu zveiyo tungsten carbidesystem zvakarongedzwa zvakaringana nekubatanidza yekutanga chirevo kuverenga uye iyo thermodynamic kugadzikana:
Iyo yepamusoro boride yekuzivikanwa kwe tungsten inofanirwa kunge iri WB3 inoumbwa ne2-d planar boron maatomu, kwete WB4 inoumbwa ne3-D matatu-mativi matatu boroni maatomu grids.
Izvo zvinowanikwa kuti iyo shear modulus inowedzera pamwe nekuderera kwesimba rayo rinoumba mu boride system ye tungsten, ichiratidza kuti izvo zvemuchina zvivakwa zvakabatana zvakanyanya nekugadzikana kwavo kwethermodynamic.
Nekuda kweayo akasarudzika emagetsi, emagetsi uye emagetsi magineti, tungsten boride yakwezva kutarisisa kukuru mukutanga kwekutsvaga uye kushandiswa kwesainzi yezvinhu.
Nekuda kweiyo yakaderera yemahara diffusion coefficient yeWB, parizvino, iyo synthesis ye dense tungsten diboride inonyanya kuwanikwa kuburikidza sintering pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza. Kune rimwe divi, nekuti B inopwa nekupisa kwakanyanya. Naizvozvo, anotungamira kugadzirira kweWB block zvinhu zvine tungsten poda uye boron poda zvinonetsa kudzora boron zvirimo, uye yakaderera borides (senge W2B) inogona kugadzirwa mukukanganisa sisitering, kuitira kuti dense block zvinhu neWB ive chikamu chikuru haigone kuwanikwa zvizere.
Munda weKushandisa: Pfeka-inodzivirira kupfeka uye semiconductor firimu yezvipfeko - zvinodzivirira zvikamu
Zvadaro: Molybdenum Boride, MoB
Tungsten boride upfu Mafekitori
Tungsten boride upfu Fekitori
Tungsten boride poda Mugadziri
Tungsten boride poda Vagadziri
Tungsten boride upfu Mutengo
Tungsten boride yeupfu Quotes